အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
12 Responses to “ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်”
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာလေး... သတိထားစရာပဲနော်..
ကိုယ်တော့ ဖိတ်ကျခဲ့တဲ့ ဆီတွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ မသိဘူး..။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကလေးရှိရင် အလုပ်လည်း ပြီးသလို ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းက ကိုယ့်အလုပ်ကို အထောက်အကူပြုမဲ့ ၀ါသနာလေးတွေကို မွေးယူရင် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ရရှိလာမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း။ (ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီး)
ဒီလို ဆီ ဥပမာ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရား အလောင်းတော် ဘဝကလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
အခုလို ဥပမာကို ကျနော်တောင်မှ စိတ်ဖိစီမှု ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုပြီး အရင်က ရေးဖူးသေးတယ်။ မချောနဲ့တော့ မတူပါဘူး။ ဥပမာပေးသပ်သပ်ပါ။
မချော စာကိုတော့ မဖတ်ဖူးပါ။ ကျေးဇူး...........။
Work and Life ..Balance ဖြစ်တင့်တဲ့ အချက်ကလေးကို သတိထားမိအောင်ဖော်ပြပေးတဲ့ စာစုလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ..
မှတ်သားစရာမို့ မှတ်ထား လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘ၀မှာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းလေးပါ မချောရေ...။ သတိထားစရာပါ...
ချောရေ ဆီဇွန်းကို ဂရုစိုက်နေရတာနဲ့ ဘာတွေကို ခလုတ်တိုက်မိမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
အခုကတော့ ဆီဈေးတွေလည်း တက်နေတော့ တစ်စက်တောင် အဖိတ်ကျမခံနိုင် ဖြစ်နေရတယ် ချောရေ။
I learn sth from it, thanks!!!
U gave mealot of Good Positive Thinking ..... Thanks so much .....
Take Care ur Health ......
လူဆိုတာ အ၇ာအားလုံးကိုသိထား၇မယ် ယေဘုယျပေါ့
အ၇ာတစ်ခုကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ် တတ်မြောက်၇မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် မောင်လေးမှာ၇ှိတယ်
မောင်လေး နယ်ပယ်တစ်ခုထားတယ် အဲဒီနယ်ပယ်ထဲတော့ လာမယှဉ်နဲ့ပေါ့
အမ ရဲ့ ဒီစာစုလေးက မောင်လေးလက်ကိုင်ပြုထားတဲ့ ဟာလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ မောင်လေး